Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Bangladesh » Ọ dịkarịa ala mmadụ 21 nwụrụ, ọtụtụ na -efu na ọdachi ụgbọ mmiri Bangladesh
Akụkọ gbasara Bangladesh • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọkachamara na -ata ụta maka nlekọta adịghị mma, ụkpụrụ nchekwa adịghị mma n'ọdụ ụgbọ mmiri na oke mmadụ karịrị akarị maka ọtụtụ ihe na -egbu egbu.
Ụgbọ njem ndị mmadụ na -ekpu n'ọdọ mmiri dị n'obodo Bijoynagar dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Bangladesh.
A kọrọ na ụgbọ mmiri ndị njem na ụgbọ mmiri na -ebu.
Dịkarịa ala, mmadụ 21 nwụrụ n'ime ụgbọ mmiri na -ekpu.
A kọrọ na ụgbọ mmiri nke bu ihe karịrị mmadụ iri isii ekpuola n'ime ọdọ mmiri dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Bangladesh ka ha kwọsịrị n'ụgbọ mmiri na -ebu ibu.
Dịkarịa ala, mmadụ 21 nwụrụ na ọtụtụ ndị ka na -efu na ihe mere na ọdọ mmiri dị n'obodo Bijoynagar, ndị ọrụ mpaghara kwuru.
Ọnụ nchara ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri jikọtara, nke mere ka ụgbọ njem ahụ kpuo, dị ka ndị ọrụ obodo si kwuo.
Ndị nnapụta agbapụtala ozu 21 gụnyere ụmụ nwanyị itoolu na ụmụaka isii ka ọ dị ugbu a, mana ndị isi na -adọ aka na ntị na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ ga -arị elu.
Amabeghị mmadụ ole nọ n'ụgbọ ahụ n'oge nkuko a, na ole ndị ka na -efu. Dị ka otu onye uwe ojii mpaghara si kwuo, ndị lanarịrị kwuru na ihe dị ka mmadụ 100 nọ n'ụgbọ ahụ.
Ndị mmadụ dị iche iche nọ na -achọ ozu ebe ahụ, a na -esikwa n'obodo ndị agbata obi kpọbata ihe enyemaka. Ndị obodo sonyekwara na ọrụ nnapụta a.
Ndị uweojii kwuru na opekata mpe mmadụ asaa ka a kpọgara n'ụlọ ọgwụ dị na mpaghara ka a napụtara ha n'ụgbọ mmiri riri.
Mpaghara ọdachi a bụ kilomita 51 (82km) n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke isi obodo, Dhaka. Ndị ọchịchị ime obodo ewepụtala kọmitii ga -enyocha ihe mberede a.
The na-agba ume bụ ihe kacha ọhụrụ na mba South Asia. N'April na Mee, mmadụ 54 nwụrụ n'ihe ọghọm ụgbọ mmiri abụọ dị iche iche.
N'ọnwa Juun afọ gara aga, ụgbọ mmiri dara na Dhaka mgbe ụgbọ mmiri ọzọ kụrụ ya n'azụ, gbuo opekata mpe mmadụ 32. N'ọnwa Febụwarị 2015, opekata mpe mmadụ 78 nwụrụ mgbe ụgbọ mmiri karịrị akarị jikọtara ụgbọ mmiri na -ebu ibu.